Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukuxinana kweBone: Isixhobo esitsha soMlinganiso wokuQhawuka komhlaba
“Abantu badla ngokukhwankqiswa kukufunda ukuba ukuxinana kwamathambo yinxalenye nje yokuba namathambo awomeleleyo asempilweni. Enyanisweni, uninzi lwezigulana ezaphuka ngenxa yamathambo eethe-ethe azinayo i-osteoporotic bone density,” utshilo uGqr.
I-Active Life Scientific, Inc. (ALSI) namhlanje ibhengeze ukuba ifumene imvume ye-US Food and Drug Administration De Novo ngesixhobo sayo sokulinganisa amathambo. Uvavanyo lweBone Score™ luthatha indlela entsha esisiseko yokulinganisa amathambo kwaye isebenzisa itekhnoloji entsha ukuvavanya ngokwasemzimbeni izicubu zethambo. Ingasetyenziselwa, kunye nezinye iimvavanyo zokuxilonga, ukunceda oogqirha bahlanganise ukuqonda okubanzi malunga nempilo yethambo lesigulana. Ukukhutshwa kwe-US yakutshanje kulandela i-CE Mark eYurophu (efunyenwe kwi-2017) kwaye ibonisa isinyathelo esibalulekileyo ekwandiseni izixhobo ezifumanekayo kumagqirha alawula impilo yethambo.
“Kukho umahluko phakathi kobungakanani bethambo onalo, okanye ukuxinana, kunye nendlela ithambo lakho elilunge ngayo, okanye umgangatho walo. Ngelishwa, uvavanyo lwezonyango lomgangatho luhlala 'yibhokisi emnyama'. Uvavanyo lwe-Bone Score ™ luchaza indlela izicubu zethambo ezichasa ngayo umngeni womzimba, kwinqanaba elikhuselekileyo, elincinci, kwaye linikezela ngedatha engazange ifumaneke ngaphambili ukuze oogqirha baqwalasele xa bephanda umgangatho wethambo lesigulane, 'uDkt Hansma wongezelela.
Uvavanyo olukhuselekileyo nolungenamitha e-ofisini, i-Bone Score™, yahlulwe kwezinye iindlela ze-radiological okanye i-imaging (i-X-reyi, i-DEXA kunye ne-CT) elinganisa ukuxinana kweeminerali kunye nokwakheka. Yindlela yomzimba, usebenzisa isixhobo senoveli (i-OsteoProbe®), echazwe njenge-Bone Material Strength index (BMSi) okanye i-Bone Score™, kwaye ibonelela oogqirha ngolwazi olungazange lufumaneke ngaphambili abangaluqwalasela, kunye nezinye izinto, xa ukuvavanya impilo yethambo lesigulana.